सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स : नाफा २०.३ प्रतिशतले बढ्यो, ईपिएस कति ? - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarसानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स : नाफा २०.३ प्रतिशतले बढ्यो, ईपिएस कति ?
गत आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा कम्पनीको खुद नाफा २०.३ प्रतिशतले बढेर १० करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले ८ करोड ५३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
समिक्षा अवधीमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क पनि १३३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिसम्ममा कम्पनीले ८२ करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
सो अवधिसम्ममा कम्पनीले १० करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
हाल चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २४ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै यो अवधिसम्ममा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा २ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ र महाविपत्ति कोषमा २ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सन्चित छ ।
समिक्षा अवधिमा कम्पनीको वार्षिकृत प्रतिसेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ ३४ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ ६९ रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीले साउन २० गते, बुधबारदेखि साउन २४ गते आईतबारसम्म प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६० करोड रूपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरी बाँकी ५४ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको थियो ।
कम्पनीको आईपिओ बाँडर्फाट हिजो शनिबारमात्र सम्पन्न भएको हो । आईपीओमा २४ लाख १९ हजार ८ सय ४८ आवेदकबाट ३ करोड ६९ लाख ५१ हजार ८० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको थियो ।
Previous articleमुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफामा उछाल, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
Next articleयुनियन लाइफ र खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयरमुल्यमा सकरात्मक सर्किट
सानिमा लाइफको शेयरमा लगातार सर्किट, लगानीकर्तालाई दियो ३००% बढी नाफा